Welcome to Taungoo Blog: ဂီတအသုံးအနှုန်းများ
ဂီတလောကထဲမှာသုံးနှုန်းနေကြတဲ့ အချို့ သောအသုံးနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာသိရှိထား ရအောင်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းတွေကတော့ ကျယ်ပြန့်လွန်းတဲ့အတွက် ချန်လှပ်ထားခဲ့ပြီး အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်သုံးနှုန်းကြတဲ့ အသုံးအနှုန်းအချို့ကိုသာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Demo (Demostration)- အစမ်းပုံဖော်တီးခတ် သီဆိုခြင်း
2. Body တီးခတ်ခြင်း- သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို စတင်ရန် အတွက် ပထမဆုံးဒရမ်တီးခတ်ခြင်း၊ Bass ဂစ်တာဖြင့် လည်းတွဲတီးလေ့ရှိသည်။ တစ်ခါတရံ Instrument များအားလုံးကိုလည်း တွဲဖက်တီးခတ်လေ့ရှိသည်။
3. Tempo - တေးသွားတစ်ခု၏ အနှေးအမြန်နှုန်း
4. Timing- စည်းချက်၊ နရီ၊ စည်းဝါး (4/4, 2/4, 3/4, 6/8 etc...)
5. Beaten- ရိုက်ချက် (Music ပုံစံကိုလိုက်၍ ပြောင်း လဲနိုင်သည်)
6. Multipel ထပ်ခြင်း- ရှေ့တွင် Body တီးထားခြင်း ကို Lead ဂစ်တာ၊ KB နှင့်အဆိုတို့သွင်းခြင်း
7. Pitch (vocal)- အသံ၊ အနိမ့်အမြင့်
8. Tone- သံနေသံထား
9. Color - အသံပြာ၊ အသံဝါ...စသည်ဖြင့်
10. Tuning- Key ညှိ၊ အသံညှိခြင်း၊ Vocal, Instrument များအား အသံညှိခြင်းကို စန္ဒယားနှင့်ညှိ လေ့ရှိကြသည်။
11. Arrangement- တေးသီချင်းအတွက် အဆို၊ တီး ခတ်မှုများအားနေရာချထားပေးခြင်း
12. Section Player- မိမိကိုယ်ပိုင်ဝိုင်းနှင့်သော်လည်း ကောင်း၊ တစ်ဦးတည်းအခြား Player များနှင့်အစုဖွဲ့ ၍ တီးခတ်သူ
13. Mixing - သီချင်း၏အသံပိုင်းဆိုင်ရာအားသာမှု အားနည်းမှု၊ တိုးခြင်း၊ ကျယ်ခြင်းအားလုံးကို ညှိယူပြင် ဆင်ခြင်း
14. Master- Mixing ပိုင်းမှအသံညှိယူမှုပြီးစီးလျှင် နောက်ဆုံးအဆင့်ပြုလုပ်သောအဆင့်